Ke ọhụrụ a na peeji nke gị ga-egosi dị iche iche ihe oyiyi ahụ na-anọchi anya mba anyị.
Mma : M na-egosi gị ihe kenkwukorita map nke ọnọdụ nke Spanish kwurula obodo.
Spanish poets: ụfọdụ n'ime ndị kasị ama Spanish poets niile oge ụfọdụ kenkwukorita atụ.
Spanish egwú: dị iche iche na ọtụtụ nnọchiteanya Spanish music na-abụ abụ.
Ọ bụrụ na i nwere ihe aro, Anyị dị njikere ige ntị!